कलाकारको जिन्दगी कल्पना र भावनामा डुबेको हुन्छ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper कलाकारको जिन्दगी कल्पना र भावनामा डुबेको हुन्छ	कलाकारको जिन्दगी कल्पना र भावनामा डुबेको हुन्छ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper कलाकारको जिन्दगी कल्पना र भावनामा डुबेको हुन्छ
कलाकारको जिन्दगी कल्पना र भावनामा डुबेको हुन्छ
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५, शनिबार
नर्गिस सोमा, चित्रकार/प्रोफेसर
एक फैशनेबल डिजाइनर र कलाकार नर्गिस पेरिन सोमाको कलाकारिता राजशाहीमा बढ्दै गयो । १० वर्षको उमेरबाट कलाकारितामा लागेकी सोमाले बचपनदेखि नै कलाकारितामा सम्मान पुरस्कार पाउने चित्रकला प्रस्तुत गर्दै आएकी थिइन् । राजशाही विश्वविद्यालयको ललितकला विभागद्वारा उनका धेरै सपनाहरु पूरा भएका हुन् । मास्टरको अध्ययनपछि उनको कलाकारितामा चर्चासँगै कला कलेजमा प्रोफेसर भएर उनी अध्यापन गराउन थालिन् । यतिबेला पिएचडी गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन् । जापानको ग्रैंड हार्ड अवार्ड, कोच के केरल मेस्ट्रो पुरस्कार, गायन कला ग्यालेरीमा चित्रकारी पुरस्कार, त्यसै वर्षमा ललिकाला एकेडेमीको शिमला (एचपी) मा अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकारी, सर्वश्रेष्ठ जयपुर पुरस्कार, लगायत अन्य प्रतियोगिताहरुमा स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएकी कलाकार सोमाले पहिलोपटक नेपालमा कला प्रदर्शनीसमेत गरेकी थिइन् । संगीत भिडियोहरू र अवधारणात्मक डिजाइनहरू सिर्जना गर्दै आएकी सोमालाई चलचित्रमा कला निर्देशनको जिम्मेवारीसमेत मिलेको थियो । कलाकार नर्गिस पेरिन सोमाले विशेषत एक व्यवसायिक महिला कलाकारको रुपमा आफूलाई चिनाउने प्रयास गरेकी छिन् । महिलालाई कमजोर ठान्नेहरुका अगाडि उनको क्षमता, प्रतिभा, गुणस्तर, योग्यता पुरुष भन्दा कम छैनन् । उनको व्यावसायिक भूमिकाको सफल परिचय देशविदेशमा परिचित भइसकेको छ । प्रस्तुत छ नेपाल कल्चरल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलको अवसरमा नेपाल आएको बेला म्यूजिकखबरका लागि सुमन बैरागीले सोमासँग गरिएको कुराकानीः
कलाकारिताको मोह कसरी जाग्यो ?
सानो उमेरमा रंगीन पत्रिकाहरू र पुस्तकहरू समीक्षा गरिरहन्थे । त्यसले मलाई कलाका रंगहरु भर्न प्रेरित गरियो । त्यसपछि मेरा हातहरु कलाकारितामा नै व्यस्त बन्दै गए ।
एउटा महिला भएर देश विदेशमा आफूलाई स्थापित गर्न कत्तिको सजिलो रहेछ ?
मनोरञ्जन क्षेत्रमा मुख्यतया चित्रहरू सबै कलाकार एक पुरुष वा महिला हो । प्राथमिकताले कलाकारको कार्यको गुणस्तर प्रदान गर्दछ । आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने हो यसकारणले मलाई महिला भएर देशविदेशमा प्रस्तुत हुनु कुनै समस्या छैन । महिला आफैंमा सक्षम हुन सक्छ, क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने देखाउनु ठूलो कुरा हो ।
चित्रभित्र के रहेछ ? किन चित्रकलालाई रोज्नुभएको नि ?
मेरो मुख्य अवधारणा उत्प्रेरित गर्दै महिलाहरुलाई जीवनशैलीदेखि अगाडी आउनको लागि हो । यो मुख्यतः म आफ्नो चित्रमा देखाउँछु ।
चित्रकार नभएको भए के बन्ने सोच थियो ?
कलाकार चित्रहरू संसारबाट इम्बेडेड जाँदैछन्, त्यहाँ आफ्नै जीवन अनुभवहरू र अन्य समाजहरू छन् । यो कलाकार चित्रकारितामा के रहेको छ । अन्ततः कलाकार चित्रण चित्रकारिताबाट बाहिर आउँछ ।
आफूले बनाएका चित्र मध्ये अहिलेसम्म मन परेको चित्र कुन थियो ?
यही चित्र भन्दा पनि म मुख्यतया महिला श्रृंखलामा चित्र कोर्ने गर्छु । महिला पात्रलाई चित्रमा उतार्नु र त्यो चित्रबाट सकारात्मक बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्नु प्रमुख लाग्छ ।
चित्रकार भइसकेपछिको जिन्दगीको परिभाषा कस्तो रहेछ ?
कलाकारको जिन्दगी क्यानभासमा नै बदलिएको हुन्छ । क्यानभासका रङहरुसँगै जिन्दगीको रङ्ग परिवर्तन हुँदा रहेछन् । चित्रकारिताको नियमलाई पछ्याउँदै हामी आफ्नै शैलीमा कलाकारको जिन्दगीको चित्रण गरिरहेका हुन्छौं । मेरो सोचाइमा अनुसार त्यहाँ चित्रकारहरूको लागि कुनै नियम छैन । जो पनि कलाकारले विश्वास महसुस गर्छ र उनको लागि अझ राम्रो छ वा उसको आफ्नै चित्रकलाको सबल बन्न सक्दछ । जब कलाकार कल्पना र भावनामा डुबेको हुन्छ त्यहाँ उसको जिन्दगी भेटिन्छ ।
अहिलेसम्मको महंगो चित्र कुन थियो र कतिमा बेच्नु भयो या बिक्रीमा छ ?
मैले बेचेका चित्रहरु एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मका छन् । आफूले कोरेका चित्रहरु सबै उस्तै लाग्छन् । अरुले मन पराइदिनुहुन्छ, अर्ड गरिदिनुहुन्छ अनि हामी कलरहरु पोत्न थाल्छौं ।
आजभोलि विहान उठेदेखिको दैनिकी कसरी बित्ने गर्छ ?
विहान उठेदेखि नै कलाकारिताको नयाँ आयामका बारेमा समय बितिरहेको हुन्छ । कसरी र कस्तो चित्र बनाउने भन्ने कल्पना र भावनामै जीवनका रंगहरु बदलिरहेका हुन्छन् ।
भर्खरै नेपाल आउनु भयो ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कल्चरल फिल्म फेस्टिभलमा निर्णायक हुँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
मैले प्रदर्शनी उद्देश्यका लागि ६ वटा देशमा भ्रमण गरेको छु । मेरो पहिलो सोलो प्रदर्शनी नेपालमा आयोजित भएको थियो । त्यसो त म पहिलो नेपाल कल्चरल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबल (ल्ऋक्ष्ँँ) मा विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल आएको हो । यदि तपाइँ चलचित्रको अध्ययन गर्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्र कलामा समावेश छ । क्यामेरा, पोशाक, लगायतका चलचित्रमा कलाका धेरै पाटाहरु समावेश हुने गर्छन् त्यसैले मलाई फिल्म फेस्टिबलमा निम्तो गर्नुभएको हो । साथै मैले छोटो चलचित्र, संगीत भिडियोको लागि कला निर्देशन दिएको छु । साथै मैले सहायक निर्देशकको रूपमा काम गरेको छु । सबैभन्दा राम्रो तरिका समाजको लागि एक स्पष्ट सन्देश दिनको लागि चलचित्र महत्वपूर्ण पाटो हो ।
नेपाली कलाकारहरुसँग संगत गर्नुभएको छ, कस्तो पाउनु भयो नेपालीहरु ?
कलाका रंगहरुसँग सहकार्य गर्दै जाँदा विभिन्न देशका कलाकारहरुसँग काम गर्ने मौका पाएको छु । नेपालका कलाकारहरुसँग पनि धेरै चित्रकलामा सहभागी भएको छु । यहाँका कलाकारहरुले मेरो मन लोभ्याएका छन् । उनीहरुसँगको सामिप्यतामा मैले आफ्नो कलालाई देखाउने अवसर पनि पाएको छु । सबै कलाकार राम्रा हुनुहुन्छ, उहाँको क्षमता देखेर मलाई खुशी लाग्छ ।
एउटा चित्रकारको नजरमा नेपाल कस्तो रहेछ ?
नेपाल धेरै सुन्दर देश हो । प्रत्येक ठाउँले पर्यटकको मन लोभ्याइरहेको हुन्छ । प्रकृतिको अथाह सागर छ यहाँ । यसकारण ज्यादा कलाकार नेपाल भ्रमण गर्छन् । मेरो नजरमा पनि नेपाल महत्व बोकेको देशमा पर्छ ।
अहिलेसम्म घुमेका देशमध्ये मन परेको देश कुन हो ?
म चित्रकला प्रदर्शनीका लागि नेदरल्यान्ड्स जापान फ्रान्स, भारत (दिल्ली, मुम्बई, केरला), सिंगापुर र श्रीलंका लगायत अन्य देशको यात्रा गरेको छु । अन्य देशको तुलनामा नेपाल बढी महत्व बोकेको मुलुक लाग्छ ।
साभारः मंसिर १६ गते प्रकाशित म्यूजिक खबर पाक्षिकबाट
‘घरमै बसेर १ मिनेटको भिडियो बनाउनुस् र पैसा कमाउनुस्’
‘रिस उठेपछि म चुपचाप बस्न सक्दिनँ’ : मञ्जु पौडेल
‘४ जना केटी साथीहरुसँग बसेर पोर्न भिडियो हेरियो’ : गायिका सिर्जना खत्री
अमेरिका अवसरहरूको देश जहाँ जस्तोसुकै काम होस् आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाइन्छ: गायक भगवान भण्डारी
शत्रुका लागि डरलाग्दो र सदस्यका लागि भरलाग्दो बनाउने छु
गायनसँगै समाजसेवामा अग्रसर अन्जु !
प्रताप दास स्वरमा गीता गिरीको ‘मायाँ’
गायत्री थापाको नयाँ तिज गीत ‘थरी थरी भोले’
‘मेरो कलिलो मन’ लिएर सांगीतिक धरातलमा आयुष्मानको आगमन
अन्जु पन्तको स्वरमा ‘पाएनी तिमिलाई मैले…’
उत्तमको शव्द संगीत अनि अनामिकाको स्वरमा तिम्लाई मैले फुल
टंक बहादुर पण्डित (9851007430)
सबिता पोखरेल (9841710751)
नबिन बाबु गुरुङ
शुभकामना मिडिया प्रा.लि. द्धारा सञ्चालित
म्युजिक खबर डट कम
VK प्लाजा, कपुरधारा,काठमाडौ
इमेल: musickhabar.com@gmail.com / musickhabarnews@gmail.com
फोन: ०१ -४०१०५४५
© म्युजिक खबर सर्वाधिकार मा सुरक्षित
Website design and develop by: Thakuri Creation.